June 13, 2019 Xafiiska Puntland Somalia, Wararka Maanta 4
Xildhibaan Rashiid Amiin oo laga soo doorto Bariga Wajeer, ayaa maanta weeraray xildhibaan Faaduma Geedi oo iyana laga soo doorto Wajeer, kana wada tirsan yihiin baarlamanka Kenya.
Afka xun day, maxaa iyada KUUKUUYADA dhex dhigay?!
WAA kaas siday Somali u kala fogtahay ANNA kaar (kulayl) baaba i saaqay caro daraadeed MARKAAN arkay gabadha oynaysa sOmalilanderna gardarradi ayyaduu saaray. WBT
Gob sare says:
malaha somalilanderku waa eey aan anshax aqoon, oo wax ku hadhsan oo dadnimo ahi aaanay jirin haba yaraatee.
Ninku markuu qamrida barto iimaankaa isna daba mara.
waxay noqonaysaa sida eyga weelka wax lagu siiyo oon la loodhowaan oo kale ummada looga saaro
Habartan feedhka lagu dhuftay waa daarood ka ku dhuftayna waa daaroood… lacagtii ay kikuuyada ka soo qaateen ayay isku dileen